အလုပ်ခွင်အသစ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့လျှင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » အလုပ်ခွင်အသစ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့လျှင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ
အလုပ်ခွင်အသစ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့လျှင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ
Posted by manawphyulay on Jul 24, 2013 in Business & Economics, Jobs & Careers |5comments
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် သင် မပျော်တော့လျှင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အတွက် ဒီထက် ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်လို လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ပိုမို ချဲ့ထွင်လိုလျှင်သော် လည်းကောင်း လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့သင့်ကြောင်း ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် ဟောပြောတာကို ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။
ယခုပြောချင်သည်များကတော့ လုပ်ငန်းလုပ်သည်ဆိုသည်မှာ မည်သည့်နေရာပင် ရောက်ရှိနေပါစေ ကိုယ် ကျွမ်းကျင့်သည့် အတတ်ပညာနှင့် ၀ါသနာပါသည့် အလုပ်မျိုးကိုသာ ရွေးချယ် ပြောင်းရွေ့သင့်ပေသည်။ အလုပ်တစ်ခု ရွှေ့ပြောင်းတော့မည်ဆိုလျှင် ငွေတစ်ခုထဲမကြည့်ပဲ ကိုယ်ပျော်ရွှင်ရာ နေရာဖြစ်မည်လားဆိုတာပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ အဆင်ပြေမလားဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်သည့် အလုပ်က အဆင်မပြေ မှုတွေ ဖြစ်လာသည့်အခါ ဘယ်လိုတွေ နေထိုင်သွားရမလဲဆိုတာပါ ကြိုတင် စဉ်းစားထားဖို့ လိုအပ်လှပါသည်။ အလုပ်ပြောင်းပြီဆိုရင်ဖြင့် ဘာကြောင့် ပြောင်းတာလဲ၊ ဘာအတွက် ပြောင်းတာလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ အရင်ဆုံး မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါသည်။ အလုပ်ပြောင်းခြင်းသည် ၀န်းကျင်သစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ ၀န်းကျင်အသစ်မှသူများဖြင့် ငါ သဟဇာတ တည့်ပါ့မလား။ ဒီဝန်းကျင်အသစ်က လူတွေက ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ၊ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေ ရှိနေသလဲဆိုတာပါ တွေးတော ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ တစ်ချို့ကျတော့ လက်ရှိအလုပ်မှာ လစာလည်းမကောင်းပဲ နောက်ဝန်းကျင်အသစ်မှ လူများနှင့် ပြောဆို ဆက်ဆံရမည်ကို ၀န်လေးကြောက်ရွံ့နေသဖြင့် ဘယ်အလုပ်မှ မပြောင်းပဲ ဘ၀ကို ဒီနေရာမှာပဲ ဒီအတိုင်း ပေးတဲ့လစာနဲ့ အငြိမ်နေသွားကြသူများလည်း သင် တွေးဖူးကောင်း တွေးဖူးပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ရတဲ့လစာနဲ့ တင်းတိမ်ရောင်ရဲစွာဖြင့် နေနိုင်မှသာ ဒီအလုပ်တစ်ခုထဲ သေတပန် သက်တစ်ဆုံး နေထိုင် သွားနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ အလုပ်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းများ အနည်းနဲ့ အများ ပြုလုပ်ရမည်သာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတလေ အရင်အလုပ်မှ လူများနဲ့ မဆက်ဆံချင်တော့သဖြင့် ပြောင်းလဲ လိုက်သောအခါ နောက်အလုပ်တစ်ခုတွင် အရင်အလုပ်မှ သူများထက် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမို ဆိုးရွား နေလျှင်ကော သင်ဘယ်လိုလုပ်မည်နည်း။ ဒါတွေ ပြောနေလို့ အလုပ်မပြောင်းတော့ဘူးလို့လည်း မပြောပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ချေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြောပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ တိုးတက်မှုအတွက် ရွေးချယ်မှုတွေ များစွာ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲသင့်သည်များကိုလည်း ပြောင်းလဲရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အသစ် မရောက်ခင်ကတည်းက ကြိုတင် ရင်ခုန်စရာများ အရင်ဆုံးဖြစ်လာမည်။ နောက် စရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ငါ့ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို ကြိုဆိုကြမလဲ။ နွေးထွေးမှုကော ရှိရဲ့လား။ ငါကရော ဘယ်လို ပြန်တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာတွေလည်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဘယ်နေရာမဆို လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ တွေ့ကြုံရပါမည်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သူက ဘယ်လို ငါက ဘယ်လိုဆိုတာထက် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပင် ပြောဆို ဆက်ဆံကြပါစေ ကိုယ့်ဘက်က နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာနဲ့ ရိုးသားစွာ စိတ်ရင်းအတိုင်း ပြန်လည်ပြုမူ ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
ယခုအချိန်တွင် အကြောင်းအရာ အတော်များများမှာ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းဖြင့် အလျင်အမြန် ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပြင်းထန်လာသည့် ခေတ်ကြီးထဲတွင် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အရည်အချင်း အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေကို နှစ်ကာလ ကြာရှည်စွာ အောင့်အီးသည်းခံပြီး အချိန်ယူ စဉ်းစားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲလာသည့်ခေတ်ကြီးထဲတွင် လူအများနဲ့ ၀င်ဆန့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတလေ ၀န်းကျင်အသစ်မှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အရာလေးများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ပြီး ဖြေဖျောက်ထားနိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှသာ စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုကို ခံစားရပေမည်။ ဒီလိုသာ မဟုတ်ပဲ လိုက်ပြီး ခံစားနေရင်ဖြင့် ဘယ်နေရာဝန်းကျင် ရောက်ရောက် နေစရာ ရှိတော့မည် မထင်ပေ။
အလုပ်ခွင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တစ်ပတ်နဲ့လည်း အဆင်မပြေနိုင်ပေ။ တစ်လလောက်တော့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမည်မှန်းမသိ ယောင်ချာချာဖြစ်နေမည်ဆိုတာ အသေအချာ ပြောရဲပါသည်။ ဒီလိုအချိန်အတွင်းမှာ အလုပ်ခွင်မှာ အရင်ရောက်ရှိနေသည့် ၀န်ထမ်းများ၏ နွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုဆိုမှု၊ လိုအပ်တာ ပြောပြမှုနှင့် ဖေးမမှုများသည် အလွန်တရာမှ လိုအပ်လှပါသည်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က နားမလည်လို့ ပြန်မမေးသည့်အခါ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလားဆိုတဲ့ အကြည့်၊ အပြောတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
အလုပ်ခွင်အသစ်မှာ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စေရာလေးတွေ အနည်းအများတော့ ကြုံဆုံရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလို ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း စိတ်ရှည်ရှည် ဇွဲရှိဖို့နှင့် အလုပ်တာဝန်များ မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန် ပြီးစီးအောင် လုပ်ပါ။ လောက သဘာဝအရ အကျိုးနှင့် အကြောင်းဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် မျှတတဲ့ အပြုအမူ ပြုသောသူသည် ကောင်းကျိုးကို ခံစားရပြီး မမျှတစွာ ပြုမူဆက်ဆံသောသူများသည် သူ့အကျိုးပေးနဲ့ သူ သွားကြမည်မှာ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်သစ်ကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိသည်ဆိုတာနှင့် အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အရင်ဆုံး ကြိုးစားထားရပါမည်။ နောက် လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုပြီး ပြုံးချင်ချင် မပြုံးချင်ချင် မိမိရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတစ်ပွင့်ကို အမြဲဆောင်ထားရမည်။ မိမိကို ပြန်လည်မပြုံးပြလည်း မိမိဘက်ကတော့ ပြုံးပြနိုင်ရမည်။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ယုံကြည်ဖို့ဆိုလျှင် သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း သိသင့်သလောက် သိထားရမည် ဖြစ်ရာ မိတ်ဆက်သဘောဖြင့် လိုသလောက် ပြောကြရပါမည်။ ပြောနေသော စကားများထဲတွင် အဆိုးမြင်သည့် စကားများပါသွားခဲ့လျှင် တစ်ဖက်လူက အထင်သေးသွားတတ်ပါသည်။ အကျိုးမရှိဘူးလား ဆိုရင် တစ်ပါးသူအကြောင်း မိမိမရင်းနှီးသေးသောသူများကို အတင်းအဖျင်းပြောခြင်းမျိုး ရှောင်ရပါမည်။ မိမိအလုပ်သစ်စရောက်တာနဲ့ ၀န်းကျင်သစ်ရဲ့ စူးစမ်းမှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု စသည်များကို အရင်ဆုံး ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မိမိအကြောင်း သူတို့အကြောင်းလေးတွေ တစ်စွန်းတစ်စ ထုတ်ဖော်ပြောပြပြီး မေးမြန်းထားရမည်။ ဥပမာ အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာကအစ ဒါတွေအပြင် အပြောအဆိုပါ ပြောသင့် မပြောသင့် မေးမြန်းပြီး မနှစ်သက်သည်များကို ရှောင်ရှားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှသာ ၀န်းကျင်သစ်ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နေမှု ထိုင်မှု အကြောင်းအရာများ သိမှတ်ထားမှသာ ၀န်းကျင်သစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ကိုယ်ကတော့ နှုတ်ဆက်မိပါရဲ့ ပြောချင်မှန်းမသိ ဘာမှန်းမသိ တစ်ယောက်ထဲ အရူးလိုလို ဘာလိုလိုဖြစ်သွားတတ်တာ တွေလည်း ကြုံဖူးပါသည်။ တချို့ကျတော့ မတူသလို မတန်သလို ဆက်ဆံရေးပြုမူပုံနှင့် တချို့ကျပြန်တော့ အသစ်ဝင်လာတာပဲ အစထဲက ငါတို့ ပေါင်းပြီး ဖိနှိပ်ထားမှဆိုတဲ့ အတွင်း အတ္တစိတ်တွေလည်း ရှိနေနိုင် ကောင်းပါရဲ့။ ဒါတွေကတော့ အကြမ်းဖျင်းပြောတာပါ အတော်များများတော့ အလိုက်အထိုက် သင့်တင့်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုကြမည်လို့ ထင်မြင်မိပါသည်။ အရာအားလုံးသည် ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နိုင်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်း ပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုဝန်းကျင်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ရင်လည်း ၀န်းကျင်အသစ်မှာ နားလည်စာနာ ခွင့်လွှတ်စွာဖြင့် စိတ်ချမ်းသာအောင် နေထိုင်နိုင်မှသာလျှင် အလုပ်ခွင်မှာ ပျော်ရွှင်မှုရှိပြီး အောင်မြင်စွာ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတော့ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဆိုတာထက် ကိုယ်ဘယ်လို ဆိုတာ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရှိစွာဖြင့် အလုပ်အကိုင် အပြောအဆို အပြုအမူနဲ့ စိတ်ရင်းအတိုင်း ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားသင့်ပါကြောင်း ပြောရင်းဖြင့် အလုပ်ခွင်သစ် ရောက်သူတိုင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ သိရှိစေရန်အတွက် ခံစားနားလည်ထားသမျှ ပြန်လည် မျှဝေခံစားလိုက်ရပါတော့သည်။
တစ်ခါတလေကျရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတောင် ကြုံတွေ့လာရတာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်ဦးမိုက်ရယ်
ပျံလာဘာမြီ … ။
ဘုကိုကျောတာရဲ ဟင်… မီးမီးကို ကျောတာရား….
ဒီပို့စ်လေးက လက်တလော ကျနော် အဖြစ်အပျက်လေးအတွက် အထောက်အကူ တစ်ခုအဖြစ်
နေရာဒေသတစ်ခုကနေ အခြားတစ်နေရာကို အလုပ်ရွေ့ပြောင်းဖို့ပါ….
ပို့စ်ထဲမှာဆိုခဲ့သလို… ၀င်ငွေက အဆင်ပြေသော်ငြားးး
ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိအတွက် ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာ… စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာမရှိရင် လကားပါပဲ…….
ထိုထက်မက ဂွအကျဆုံးကတော့ နေရာဒေသတစ်ခုရဲ့ အစာအသောက်တွေက
မိမိအကြိုက်နဲ့ အံမ၀င်ရင် ဒါဟာလည်း စိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုပါပဲ……